राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद विवाद : अदालत बहसको 'लाइभ' माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा
नेपाल लाइभ बुधबार, भदौ २५, २०७६, १७:२७
नयाँदिल्ली- भारतीय सर्वोच्च अदालतमा केही सातादेखि चल्दै आएको राम मन्दिर–बाबरी मस्जित विवाद सुनुवाई चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाईसहितको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा निरन्तर सुनुवाई गरिरहको छ।
यो प्रकरणमा चलिरहेको बहश प्रत्यक्ष प्रशारण हुनुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको छ। आरएसएसका एक सर्मथकले सर्वोच्च अदालतमा अयोध्याको यो विवादमा भइरहेको बहश प्रत्यक्ष प्रशारण हुनुपर्ने माग गर्दै पिआईएल अन्तर्गत रिट हालेका हुन्।
के एन गोविन्दाचार्यले यो विवादमा सबैले हेर्न पाउने माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। उक्त निवेदनको सुनुवाईका लागि सर्वोच्चले सेप्टेम्बर १६ लाई पेसीको मिति तोकेको छ। अयोध्याय विवाद ७० वर्षदेखि एकपछि अर्को अदालतमा चलिरहेको छ। हिन्दू, मुस्लिम र अन्य विभिन्न पक्ष संलग्न रहेको उक्त मुद्दा अझै केही हप्ता सुनुवाई चल्ने अनुमान गरिएको छ।
यो विवादमा मध्यस्थताबाट समाधान गर्ने प्रयास असफल भएपछि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाई थालेको थियो।
प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगाई नेतृत्वको पाँच जनाको इजलाशले यसमा सुनुवाई गरिरहेको छ। साउन २८ गतेदेखि सर्वोच्चले यो विवादमा अन्तिम सुनुवाई थालेको थियो।
राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादको सुरुवात २३ डिसेम्बर १९४९ मा मस्जिदभित्र लुकाएर मूर्ति राखिएबाट सुरु भएको मानिन्छ।
सुरुवाती मुद्दा उक्त मूर्ति मस्जिदको आँगनमा पहिलेदेखि कायम रहेको राम चबुतरेमा पुनः लैजाने वा अहिले जुन स्थानमा भेटिएको छ त्यहीँ पूजा गर्ने भन्ने थियो।
तर, ६० साल लामो यो लडाइँ अहिले पनि यही विवादकै घेरामा घुमेको छ। ६ दशकको अदालती प्रक्रियामा विवादित मस्जिद हिन्दू मन्दिर भत्काएर बनाइएको थियो? के यो रामको जन्मभूमि थियो? यही विवाद अहिले पनि कायमै छ।
यस विवादमा किनारा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो मस्जिद कहिले र कसले निर्माण गरेको टुङ्गो लगाउनु पनि हो। यो मस्जिद बाबर अर्थात् मीर बाँकीले बनाएकै हुन् त? भन्ने हो।
सुरुवाती मुद्दा उक्त मूर्ति मस्जिदको आँगनमा राखी रामको नियमित पूजा(आराधाना हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि यो विवाद कायमै रहेको हो। यो मामलामा केही कानुनी प्रश्नसमेत छन्।